EGBEIGWE AGBAGBUOLA ỤMỤAKA ATỌ NA NSỤKA
Nsụka – Egbeigwe egbuola ụmụaka abụọ nọ n’ụlọ akwụkwọ praịmarị, ma merụkwaa mmadụ abụọ ndị ọzọ ahụ na Nsụka, Enugwu Steeti. Ụmụaka ndị ahụ nọ n’agbata afọ iri n’abụọ nakwa afọ iri n’ise bụ ndị Ụmụnkashi dị n’Okpuru Ọchịchị Nsụka. Ụmụaka abụọ ahụ laworo mmụọ aha bụ Asogwa Nnadozie, onyeRead More →
ÓTÙ NDỊ AMOSU NA-EBUSO APOSTLE SULEMAN AGHA MAKA OKWU ỊGA KPEERE NDỊ ỌRỊA KORO EKPERE
Legọs – Òtù ndị Amosu, Advocacy for Alleged Witches (AFAW) ji iwe na-ebuso Apostle Johnson Suleman nke Omega Fire Ministries, Auchi, Edo Steeti agha maka ikwu ka Gọọmenti hapụ ndị ụkọchukwu ka ha gaa n’ogige nkewapụ ọrịa koro gaa kpeere ndị ọrịa ahụ ji ekpere. AFAW adọbula ndị Naịjiriya akaRead More →
EBUM ỌNỤ ỌNWA ABỤỌ N’ERIGHI NRI ATAALA ISI ÓTÙ NWANYỊ
Sapele – Ótù nwanyị ka hoo!haa!! nwetara ozi na ọ nwụnyụrụ anya na Sapele, Delta Steeti, ka ọ nọ n’ebum ọnụ ọnwa abụọ n’erighi ihe ọbụla. Ndị mara nwanyị ahụ sịrị na ya bụ ihe mere n’Okporo Ụzọ MTN, na mpaghara Okirigwhere, Sapele. Nwanyị ahụ laworo mmụọ, di ya naRead More →
ỌGWỤ KORO ỌHỤRỤ NDỊ MADAGASCAR: SENEGAL ATỤỌLA YA.
Dakar, Senegal – Gọọmenti mba Senegal ekwuola na ọ tụọla ọgwụ ọrịa koro ọhụrụ ahụ mba Madagascar mepụtara. Abdou Latif Coulibaly, Ọnụ na-ekwuru Gọọmenti mba ahụ gwara ndị nta akụkọ na mba Senegal dị njikere ịnwale ọgwụ “ọrụ ebube” ahụ a na-akpọ Covid-Organics. Ọgwụ Covid-Organics bụ ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọRead More →
A NWUCHIKỌỌLA NDỊ ỌRỊA KORO GBAPỤRỤ N’OGIGE NKEWAPỤ KA HA NỌ N’ỌDỤ NKWỤ
Ndị Uwe Ojii na Kenya anwuchikọọla mmadụ abụọ gbapụrụ n’ogige nkewapụ ọrịa koro ebe ha nọzị n’ọdụ nkwụ aṅụ mmanya. Ha so n’ime ọtụtụ mmadụ e setere n’onyonyoo ka ha na-awufe mgbidi otú ogige nkewapụ ọrịa koro dị na Naịrobi, Kenya. Ndị a ndị Uwe Ojii jidere kwuru na haRead More →
MMEPE OBODO AGAGHỊ ENWE ISI MA EWEZUGA NDỊ NTA AKỤKỌ
–Dọkịnta Laz Ude Eze depụtara edemede a Ìgbò bụ Ìgbò ekelekwaa m unu ọzọ. E were la m ozi ọzọ bata n’izu ụka nke a na ọgbọ Ndozi Obodo. Na ngwụcha izu ụka gara aga, akwụkwọ akụkọ dị iche iche depụtara na ndị uwe ojii jidere Chijioke Agwụ, onye ntaRead More →
OSIKAPA GỌỌMENTI ETITI ADỊGHỊDỊ MMA MMADỤ INYE NKỊTA – NDỊ GỌVANỌ MPAGHARA ỌDỊDA ANYANWỤ
Ịbadan – Gọvanọ Seyi Makinde nke Ọyọ Steeti na ndị otu ya na Steeti nile dị na Mpaghara Ọdịda Anyanwụ Naịjiriya ajụla akpa osikapa nile Gọọmenti Etiti bunyere ha ụbọchị Mọnde gara aga, na ha gbara ọtị. Gọọmenti Etiti siri n’aka ụlọ ọrụ Ndị Kọstọm bunye Steeti isii nọ naRead More →
GANA: NDỊ NTỌROBIA EJIRILA IWE TIGBUO NWOKE CHAỊNA
Gana – Otu onye Chaịna anwụnyụọla anya, ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ merụrụ ezigbo ahụ oge ndị ntorobịa iwe dị n’obi wakporo ha n’obodo Nsuem Number Two dị na Nkewata Ọchịchị Bosome Freho na Mpaghara Ashanti na mba Gana. Onye ahụ lara mmụọ aha ya bụ Li Dao Peng, onyeRead More →
ONYE UWE OJII AGBAGBUOLA NWANYỊ ONYE OTU YA N’ỌRỤ MKPỌCHI OBODO ỌRỊA KORO
Pọt Haakọt – Njinji jiri taa na Pọt Haakọt oge otu onye Uwe Ojii gbagburu nwanyị onye Uwe Ojii ibe ya na Njekọrịta Ụzọ Eneka n’ehihie taa. Onye Uwe Ojii so na otu aka ọkụ (Task force) Gọọmenti Rivas Steeti hiwere maka idebe iwu mkpọchi obodo ọrịa koro. Ọ gbaliriRead More →
“ỤMAHỊ, IHE ỌBỤLA MERE NDỊ NTA AKỤKỌ N’EBONYỊ NỌ GỊ N’ISI” -NUJ
Abakaliki – Otu jikọtara ndị ndị nta akụkọ na Naịjiriya bụ Nigerian Union of Journalists (NUJ) ekwuola hoo!haa!! na ihe ọbụla mere ndị nta akụkọ n’Ebọnyị Steeti dị n’isi Gọvanọ Steeti ahụ bụ Omenka Devid Ụmahị. Nke a bụ maka Mmachi Gọvanọ Ụmahi machiri ndị nta akụkọ abụọ, Chijioke AgwụRead More →
A NWUCHIKỌỌLA NWANYỊ ỊNDỊYA JI ỌDESHI EZU OHI NA NDỊ OTU YA
Legọs – Aka ndi Uwe Ojii na Legọs akparala ndị ohi asaa nke Nwanyị Ịndịya bụ onyeisi ha, ndị na-ezu ụlọ ụka na Ụlọ ahịa ukwu(Super market). Site n’ozi nke Ọnụ na-ekwuru ndi Uwe Ojii na Legọs Steeti, DSP Elkana Bala, e jidere otu ndị ohi mmadụ asaa ahụ nkeRead More →
E JIDELA NDỊ NTỌ ÓGWỤ́ EGO MMADỤ ISII
Legọs – Njinji jiri na Legọs n’ehihie ụbọchị Mọnde n’akụkụ Shogunle na Ladipo dị Okporo ụzọ Agege na Legọs Steeti, oge aka kpaara ndị ntọrị ọ́gwụ̀ ego mmadụ isii. Site n’ozi hoo!haa!! nwetara, a nwuchikọrọ ndị ntọrị ọ́gwụ̀ ego ahụ, chọrọ ịtọ̀ otu nwanyị onye na- azàcha okporo ụzọ. Kaosiladi,Read More →
AGỤỤ ỌRỊA KORO: UNU ARỊỌZILA M EGO, SỌỌSỌ NA NOLLYWOOD KA M NA-EME ỌGWỤ EGO -YUL
Legọs – Odogwu Nollywood, Yul Edochie agwala ndị mmasị ya (followers) ya n’ọbaozi mmekọrịta dị iche iche, na ọgwụ ego ya bụ sọọsọ n’onyonyoo, na Nollywood. Yul kwuru nke a maka ọtụtụ ndị na-arịọ ya ego n’ọba ozi mmekọrịta dị iche iche dịka Twitter na Instagram, kemgbe mkpọchi obodo ọrịaRead More →
ONYE JIGAWA “SI ENUGWU BUTE ỌRỊA KORO” , EZIGBO NNYOCHA NA-AGA N’IHU – OBI, KỌMISHỌNA AHỤIKE
Enugwu – Dọkịnta Ikechukwu Obi, Kọmishọna Enugwu Steeti na-ahụ maka Ahụike ekwuola na ezigbo nyocha na-aga n’ihu ugbua maka onye Jigawa Steeti asị na o si n’Enugwu Steeti bute ọrịa koro. Site n’ozi na-ewusa ebe nile n’obaozi ugbua, Dọkịnta Abba Umar Zakari, Kọmishọna na-ahụ maka Ahụike na Jigawa Steeti nọrọRead More →
OWERE : E JIDELA NWOKE YA NA NDỊ ENYI YA NA EDINA OBERE ADA YA
Owere – Ndị Uwe Ojii N’Imo Steeti ejidela otu nwoke dị iri afọ anọ n’anọ, Mazị Chimnonso Okonkwo, onye ya na ndị enyi ya na-edina obere ada ya nwanyị dị afọ iri n’ise n’Ọ́jị́, Owere. Ọnụ na-ekwuru ndị Uwe Ojii na Steeti ahụ, Mazị Orlando Godson Ikeokwu, kwuru sị “NkeRead More →
ỌRỊA KORO : NDỊ AKWỤLA EBEELA EGO
Legọs – Ndị akwụla nọ na Naịjiriya ebeela ego na “ngwa ahịa” ha maka ọrịa koro. Ihe butere nkea bụ oke njọ ahịa nke ọrịa koro butere. N’akụkụ Naịjiriya nile, ihe amaghịkwa kwụrụ. Gọọmenti Etiti nakwa Gọọmenti steeti dị iche iche enweela mkpọchi obodo nakwa mmachibido mmekọrịta ọhaneze. Ọzọkwa bụRead More →
GỌỌMENTI BUHARỊ NA – EMEGBU ENUGWU STEETI – APC ENUGWU STEETI
– O nwebeghi onye Enugwu ọbụla ketara ihe nbelata ọrịa koro – Ben Nwoye Enugwu – Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress(APC), Ngalaba Enugwu Steeti ebeela akwa arịrị maka oke agụụ dịzị n’obodo ugbua maka mkpọchi obodo ọrịa koro. N’okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ụnyaahụ ka e ke chara ngwaRead More →
ỌKỤ NA-AGBA AHỊA, NDỊ EKPERIME NA-EZU NGWA AHỊA NDỊ MMADỤ
Ibadan – Ka ọkụ na-agba n’Ahịa Dugbe, nnukwu ahịa dị n’Ibadan, Ọyọ Steeti, ụbọchị Wenezdee, ndị ekperime ji ohere ahụ na-ebukọsị ngwa ahịa ndị mmadụ. Nke kacha njọ bụ otu nwamadị ụgbọala ya gbara ọkụ n’ahịa ahụ. Ụgbọala ahụ, Toyota Matrix nwuuru ọkụ oge ndị ntinyụ ọkụ na-agba mbọ itinyụRead More →